Kaalay Wax Kabaro Qalabka Neefsiga ee Hawo Siinta (Ventilation) | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — April 12, 2020
Haddii jirku aanu helin oksijiin, qofku waxa uu kudhintaa daqiiqado gudahood. Mashiinnada ka caawinaya bukaannada neef sashada waxaa loo yaqaanaa hawo-hayeyaasha lafarsameeyay ama afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa (Mechanical Ventilation).
Mashiinka neefsashada ee ugu horreeyay wuxuu ahaa kii lasoosaaray sanadkii 1928dii, waxaana loo yaqaanay “Lung Iron cylinder”.
Mashiinkaan waxaa aad loo isticmaalay intii u dhaxeysay sanadihii 1930-meeyadii illaa 1950-meeyadii, waxaana loo adeegsaday bukaanada uu aadka usaameeyay cudurka dabeesha, taas oo ku sababtay bukaanada neef qabatin.
Waxay u isticmaaleen cadaadis taban (Negative Pressure) si ay uga caawiyaan bukaanka inay neefsadaan inta ay jiifaan qolka hawada Sambabka loodiyaariyay ee gacan ku sameyska ah.
Bamka ayaa hawada ka saaraya qolka dhexdiisa, isaga oo abuuraya cadaadis hawo yar oo ku wareegsan laabta bukaanka (chest). Tani waxay u suurtogelisay sambabbada inay ballaariyaan oo ey haw qaataan, taasoo keentay bukaanka inuu ku neefsado sicaadi ah. Waa qalab la’isticmaalay xilli oo kaqeyb qaatay neefsiinta bukaanno badan oo u baahnaa hawo ama Oksijiin.
Iron Lung ama qolka lagu farsameeyay hawada waxaa la sameeyay intii lagu gudajiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka si loo siiyo oksijiin duuliyeyaasha diyaaradeed ee duulaya meel aad u sareeysa.
Fantilaytaris -ka (Ventilation) ayaa beddelay qalabkii hawo siinta ee -Iron Lung – kaas oo ushaqeey naayay hab cadaadis taban ah, balse waxaa lasoosaaray qalab katayo badan oo kushqeynaayo ama loo isticmaalaayo cadaadis togan, taasoo la micno ah inay hawo ku soo tuuraan sambabbada iyada oo tubada lamarinayo Afka, hunguriga illaa sanbabada laga geeyo.
Ventilators waxay noqdeen aalado muhiim u ah qalliinka iyo sidoo kale daawada daryeelka degdegga ah ee xagga neefsiga.
Soomaaliya Maheysataa Neefsiiyayaalka Casriga ah (Ventilator):
Nolosha aadanaha waxa ugu muhiimsan oo aan lanoolaan karin la’aantiis waxaa ugu horeeyo Oksijiinta (O2), waa wax haddii aan weyno si dhaqso badan aan ku dhiman karno, balse aadanaha oo kali ah maahan ee noolaha uu Alle SWT uumay oo dhan waxa ey ubbaahan yihiin Oksijiinta mana jireyso wax nolol ah haddii oksijiinta laga qaado adduunkaan, taasna waxaa kumahadsan Alle weyne SWT.
Dalkeenna hooyo waxaa kadhacay bur-bur iyo dagaal sokeeye, dabcan nolosha aas-aaskeediina waxa ey labur burtay dalka, Caafimaadka waxa uu kamid yahay waxyaabihii bur-buray gabi ahaanba, xaqiiqdii aad ayuu udumay inkastoo ey jiraan dad dadaalay oo gacanta ku haayay goobo caafimaad oo gooni gooni ah.
Qalabka hawo siinta casriga ah Soomaaliya waxa uu soogaaray sanadihii u danbeeyay, waxaana lasheegaa in tirade dalka taal ey kayartahay labo boqol oo xabo, macnaha in ku filan labo boqol oo bukaan, dal dhan oo ey dad ku noolyihiin in cisbitaaladiisa laga helo labo boqol oo ah qalabka hawo siinta casriga ah waa arrin aad u adagy oo dhibaato ku’ah dadka dalkaasi kunool. Waxa ey u egtahay in aanan dareensanayn ama aanan umaleynayn in ey dhibaato jirto, balse dhibaato in ey jirto marki ladareemo ayaa wax soo saar lasameeyn doonaa!!! Haaheey…… sow runteyda maahan aqristow?
Makulatahay in qalabkaan dalka lagu sameyn karo? Malaga yaabaa maalin uun in ey dadkeenna fahmaan shaqada u taal oo ey kasoo jeestaan dhiig daadinta???
Tags: Qalabka Neefsiga ee Hawo siinta (Ventilation)?Soomaali Ventilators
Next post Korona Fayras: Saameynta Dhaqaalle uu Afrika ku Yeelan Karo Cudurkaan Korona
Previous post Covid-19 Iyo Hinjibiso Maxaa Ka Dhexeeya?